पर्समा यी ५ मध्ये एक चीज राख्नुहोस्: कहिलै हुँदैन् पैसाको कमी ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/पर्समा यी ५ मध्ये एक चीज राख्नुहोस्: कहिलै हुँदैन् पैसाको कमी !
धेरै भन्दा धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना कसलाइ नहोला र ? जसको लागि मानिसहरू कडा मेहेनत गर्न पछि हट्दैनन । तर लाखैा कोशिस गर्दा पनि हातमा पैसा टिक्दैन ।
विश्व नै कोरोनासंग जुधिरहेका बेला बैज्ञानिकहरुले गरिदिए फेरी यस्तो चमत्कार, चौतर्फी वाहवाही हेर्नुहोस्